EX - ABSDF: လူသားတန်ဖိုး
September 20, 2013 at 1:39pm
ဒီကနေ့ သတင်းမှာ တူရက နိုင်ငံက တူရကီဖုန်းမော်အသတ် ခံရတာကို မကျေနပ်လို့ ကောလိပ် ကျောင်းသားတွေ ဆန္ဒပြကြလို့ ပုလိပ်တွေက နှိ်မ်နှင်းခဲ့ကြတယ်။
မွတ်စ်စလင်ကမ္ဘာကို ကြည့်ရင် အာရပ်နွေဦး ဆိုတာ တကယ်တော့ အာရပ်ငရဲ ဘ၀ကိုရောက်နေကြရပြီ
ဆီးရီးယားက ပြည်တွင်းစစ်ဟာ လက်ဘီနင်ကို မငြိမ်မသက်ဖြစ်စေနေပြီ။ အကြောင်းက ဆီးရီးယားက လူမျိုးရေးပေါင်းစုံ ဟာ လက်ဘီနင်မှာလည်း အတူတူပဲ။ ဆီးရီးယားမှာလည်း စူနီ ရှီရာ အထိက ပြဿနာ အပြင် လူနဲစု တွေဖြစ်တဲ့ Alawites ၊ ခရိယန် တွေနဲ့ Kurds တွေရှိကြတယ်။ လက်ဘီနင်မှာ Druse Christians တွေအပြင် အခုထကြွနေတာက ဆော်ဒီတွေနဲ့ alliance ယူထားတဲ့ Salafi movement လာဖြစ်တယ်။ Salafi Iman တွေက ဆီးရီးယားမှာ Jihad ဆင်နွှဲဖို့ ဗြောင် လှုံ့ဆော်လျှက်ရှိတယ်။
ဆီးရီးယား ပြည်တွင်းစစ်ဟာ အပေါ်ယံက ကြည့်ရင် စူနီ ရှီရာ အပြင် ခရိယန် Awalites Druse Kurds စတဲ့ လူနဲစုတွေပါ ပါဝင်ရှုပ်ထွေးတဲ့ ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်တယ်။ Regional မျက်စိ နဲ့ ကြည့်ရင် Saudi နဲ့ Iran တို့ရဲ့ အားပြိုင်မှု အပြင် Hezbollah နဲ့ Israel ပါ ၊ ပါဝင်ရှုပ်ထွေးလာတယ်။ဒီနောက်က Global Powers တွေဖြစ် တဲ့ အမေရိကန်နဲ့ ရုရှားတွေပါလာတယ်။ ဒီလို ရှုပ်ထွေးနေတဲ့ အချိန်မှာ ဂျီဟာဒစ်တွေ ပါလာတော့ ရှုပ်ထွေး သထက် ရှုပ်ထွေးလာတော့တယ်။ ဆီးရီးယား ပြဿနာကို level တစ်ခုထဲက ကြည့်လို့မရဖူး
ဆီးရီးယား ရဲ့ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေ ဖြစ်တဲ့ Jordan – Iraq - Turkey တို့ဟာလည်း ဒီပြည်တွင်းစစ်နဲ့ ရှောင်လို့မရဖူး။ refugee ပြဿနာတွေရှိလာတယ်။ Turkey က ဆီးရီးယားကို ဗြောင်ရန်ရှာတယ်။
Libya မှာလည်း အရှေ့နဲ့ အနောက် ပြဿနာတွေရှိတဲ့ ပြင် လက်ရှိ က မင်းမဲ့ပဲ။ ဗဟိုအစိုးရဲ့ အာဏါမရှိဖူး။ အဲလ်ကိုင်းဒါးရဲ့ မဟာမိတ်တွေ တချို့ဒေသ တွေမှာ အုပ်ချုပ်လျှက်ရှိတယ်။
Gulf States တွေမှာ လည်း ဆူနီ ၊ ရှီရာ ဆူပူမှုတွေရှိတယ်။
ရီမင်မှာလည်း မငြိမ်သက်။ ဒီကနေ့ လူ ၈၁ ယောာက် သေသွားပြီ။ မငြိမ်းချမ်း
အီရတ်ဟာလည်း ပြည်တွင်းစစ်ကို ဦးတည်လျှက်ရှိတယ်။
အာရပ်ကမ္ဘာမှာ စူနီ ၊ ရှီရာ သတ်ပြတ်မှု အပြင် ဘင်လါဒင်တို့ရဲ့ Isalmist Jihadists တွေက လွှမ်းမိုးလျှက် ရှိကြတယ်။
လူတွေ သတိမထားမိ ကြတာက အာရပ်ကမ္ဘာဟာ လူနေမှုအဆင့်အတန်းဟာ Tribalism ခေါ်တဲ့ ရိုးရာ လူကြီး Tribal Chief တွေရဲ့ အုပ်ချုပ်မှုကိုနာခံတဲ့ Tribalism Stage မှာပဲ ရှိသေးတယ်။
Human Rights စတဲ့ (လူ) ကို (လူ) လိုမြင်တတ်တဲ့ (အဆင့်) မှာ မရှိသေးပါဖူး။
Liberty ဆိုတာ ကို လုံဝ နားမလည်သေးဖူး ဘာသာကလည်း ခွင့်မပြုဖူး
သူတို့ အမြင်မှာ က (လူ) ကိုမြင်တာက (ဘာသာရေး) အမြင်သက်သက်ပဲ ရှိသေးတယ်
လူတစ်ယောက် ကို Allah ကိုယုံတဲ့ Muslim နဲ့ Infidel မိစ္ဆာကောင် တွေအဖြစ်ပဲ (မြင်) တယ်
ဥရောပ က လူဖြူတွေက စိတ်ကူးယဉ်ပြီးတော့ ဘာ Rights ညာ Rights ၊ တွေတွေးပြီး
လူတွေကို လူလိုဆက်ဆံရမယ်ဆိုပြီး တွေးကြရုံမက လူ အားလုံး အတူတူချည်းဖို့ Nation States တွေမလိုပါဖူးဆိုတဲ့ Beyond Nation States Idealism တွေသွပ်သွင်း လာကြတယ်။
Liberal တွေရဲ့ အတွေးက လူ ကို လူလိုကြည့်ပြီး လူကိုတန်ဖိုး ထားတဲ့ အကျင့် အမြင်
Islamists တွေက လူကိုတန်ဖိုးတားသည်မဟုတ် ၊ ဘုရားအတွက် us and them ပဲကြည့်ပြီး သိမ်းသွင်းဖို့ object အဖြစ်သာ ကြည့်ကြသည်။ ဒါကြောင့် them ဆိုတာနဲ့ လည်းပင်းလှီး ဖို့ ၀န်မလေး တာပေါ့။ သူတို့ တန်ဖိုးအထားဆုံးက Allah အတွက်ပဲလေ။
ဒီအချိန်မှာ Liberals တွေရဲ့ Multiculturalism ဆိုတာ က Islamists တွေ အတွက် သိန်းထီ ပေါက်တာပဲ
ဒီကနေ့ပဲ Asian Channel news မှာ Singaporeans တွေအတွက် ခလေးတစ်ယောက် ကို စင်ဒေါ်လာ (၅) သိန်း ကနေ (၉) သိန်းအထိကုန်တယ်။ ဒါကို သိတဲ့ Singaporeans တွေ နောက်ကျမှခလေးယူ ကြ တယ်။ မိသားစု တစ်ခု ခလေးမျာများ မယူဖူး။ ခလေးမွေးနှုန်း ကျလာတယ်။
Islamist တွေက ခလေးဆိုတာ ဘုရားပေးတာ။ ခိုင်း စားဖို့သာ (မြင်) ကြတာ။ (လူ) ဖြစ်အောင်တာဝန်ယူဖို့ မမြင်ကြ
ဒါကြောင့် လူ ကိုတန်ဖိုးထားတဲ့ Liberals တွေ အတွက်က ခလေးတစ်ယောက် ကို လူတန်းစေ့ နေနိုင်ဖို့ မိဖ ကတာဝန်မယူနိုင်ရင် အစိုးရက တာဝန်ယူရမယ်
Mulitculturalism ကိုကိုးကွယ်တဲ့ Liberal policy ကြောင့် ဖိတ်ခေါ်ခံရတဲ့ Islamists တွေအဖို့ တဖျွပ်ဖျွပ်မွေး ၊ အစိုးရကကြွေး နဲ့ ဟန်ကိုကျလို့…..
ဒီမိုကရေစီ ဆိုတာက (မဲ) ပဲလေ….. Islamists တွေဦးရည်များလာတော့ (မဲ) တွေဖြစ်လာတာပေါ့
နောက်ဆုံးတော့ ဥရောပ မှာ Islamists တွေရဲ့ ISLAM အလံထောင်နိုင်ဖို့ စိတ်ကူယဉ်နိုင်တဲ့ ဘ၀ရောက်ခဲ့ရပြီ
ISLAMIST တွေ ရဲ့ အတွေးက Islamic Caliphates တွေထောင်နိုင်ဖို့
ဥရောပ က Liberals တွေရဲ့ အတွေးက States Less Society ထူထောင်ဖို့
Idealistic Liberals တွေ နဲ့ Islamists တွေ့ရဲ့ အတွေး နဲ့ ရည်မှန်းချက်တွေက တကမ္ဘာစီ
ဆီ နဲ့ ရေ လို ရောလို့မရဖူး
ဒါကြောင့် Huntington ပြောတဲ့ Clash of Civilizations ဆိုတာ တကယ်လာဖြစ်တာပဲ
ဒီနေရာမှာ လူငယ်လေးတွေကို စဉ်းစားစေချင်တာက ယဉ်ကျေးမှု Culture တစ်ခုနောက်မှာ Value System ဆိုတာ ရှိတယ်။
ဥပမာ Buddhist Culture ရဲ့ နောက်မှာ Buddhist Value System ဆိုတာရှိတယ်
ဒီလိုပဲ Islamic Culture နောက်မှာ သူ့ရဲ့ value sytem ဆိုတာရှိတယ်
ဘာသာရေးသာမက ဥပမာ liberal အတွေအခေါ်နောက်မှာလည်း value system ရှိတယ်
Liberals တွေက Human Rights & Life ကိုတန်ဖိုးထားတယ်
Islamists တွေက (လူ) ထက် ဘုရားသခင် က ပို တန်ဖိုးရှိတယ်
ဒါကြောင့် ဘုရားသခင် အတွက် လူသတ်မယ်။ မိမိကိုယ်ကိုတောင် စတေးဖို့ဝန် မလေးဖူး
ဂျပန်တွေက ဒုတိယကမ္ဘာစစ်က ဧကရာဇ်ဘုရင်အတွက် အသေခံဖို့ ၀န်မလေးဖူး
Liberalism အတွက် အရေးပါတဲ့ Value System တစ်ခုက LIBERTY
Islamists တွေရဲ့ အဓိက တန်ဖိုး က CONTROL. Control in the name of Allah
ဒါကြောင့် “ဘုရားသခင် အလိုကျ” အားလုံးလိုက် လုပ်ကြရတာ
ဒီတော့ ဒီ Value Systems နှစ်ခုကို ဘယ်လို Reconcile လုပ်မလဲ
(မှတ်ချက်။ ပြဿနာ က “ဘုရားသခင် အလိုကျ” ဆိုတာက INTERPRETATION တွေပဲ)
နောက်ဆုံး တော့ တန်ဖိုးထားတာခြင်း မတူတဲ့ Culture တွေဘယ်လိုလာပေါင်းနေကြမှာလဲ
ဘယ်သူ က ဘယ်သူ့ကို လွှမ်းမိုးနိုင်မယ်ထင်ပါသလဲ
လူငယ်လေးတွေကို အပေါ်ယံကြော သာမကြည့်စေချင်ဖူး
ပြဿနာတစ်ခုကို ဖက်စုံက ကြည့်ပြီး မှ မိမိအတွေးပေါ်လာအောင် ကြည့်စေချင်တယ်
ဒါမှ တကယ်ယုံကြည်ချက် Conviction ဆိုတာ ပေါ်လာလိမ့်မယ်
နိုင်ငံရေးရဲ့ အဓိက (အင်အား) ဟာ Conviction ပဲလေ
ကမ္ဘာကြီးဟာ သူ့ဝင်ရိုးပေါ်မှာ ပုံမှန် လည်ပတ်နေတယ်
ဒါပေမဲ့ ပြောင်လဲ တိုးတက်မှုဟာ ကမ္ဘာ့တစ်နေရာနဲ့ တစ်နေရာ မတူကြဖူး
အာရပ်ကမ္ဘာ ၊ မွတ်စလင်ကမ္ဘာမှာ အချင်းချင်း သတ်ကြဖြတ်ကြ လို့ မဆုံးဖူး
Liberals ကမ္ဘာမှာ Excesses တွေများပြီး အကြွေးတွေ လည်ပင်းနစ်နေတယ်
အာရှ မှာ ငြိမ်းချမ်းပြီး … Developments တွေ အပြိုင်အဆိုင် ဖြစ်နေကြတယ်
ဘာကြောင့် ဒီလို …ကွာထွက်သွားကြတာလဲ?
Value System ကြောင့်ပဲ မဟုတ်လား။
Liberalism မှာလဲ Idealism နဲ့ Realism ဆိုပြီး (အတွေး) အပြိုင်ရှိကြပါတယ်။
Karl Marx လောက်အတွေးကောင်းတာ စေတနာမှန်သူ မရှိဖူး လို့ထင်မိတယ်
ဒါပေမဲ့ Karl Marx ရဲ့အဓိက အားနဲချက် ကလက်တွေ့ မရှိဖူး
ဒါကြောင့် အတွေးလွန်းပြီး (လောဘ) ကိုမေ့သွားတာနဲ့ အာလုံး (လွဲ) ကုန်ရတယ်
စက်တင်ဘာလ ၂၀ ရက် ၂၀၁၃
Posted by lu bo at 11:13 AM